Centara ịrịba ama MOU na KMA Hotels maka isii Myanmar Hotels
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na-agbasa News Travel » Centara ịrịba ama MOU na KMA Hotels maka isii Myanmar Hotels
Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • Akwụkwọ akụkọ Myanmar • News • Mgbasa Ozi • Akụkọ na -emegharị na Thailand • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Centara Hotels & Resorts, Onye isi na-ahụ maka ndị ọrụ nkwari akụ na Thailand, na KMA Hotels Group, enyemaka nke Kaung Myanmar Aung (KMA) Group of Companies, ekwupụtala mbinye aka nke MOU iji bido mmepe na mmezigharị ụlọ oriri na nkwari akụ isii dị na ụfọdụ ebe ndị kachasị ewu ewu na Myanmar. ha niile ka a jikwaa ha n'okpuru akara Centara. Ọrụ na oru ngo a ga - ebido na 2019.
Ihe oru ngo a ga - ahu ato ato nke ulo oru KMA Hotels nke di na Inle, Naypyitaw, na Taungoo na-emegharia ohuru tupu imeghe ya, na mmepe nke ohuru ohuru 3 na Bagan na Than Daung. Hotelslọ nkwari akụ ọhụrụ 3 bụ Centara Bagan River View Resort & Spa Kaytumadi Dynasty Bagan Resort, Centara Boutique Collection na Shwe Than Daung Resort, Centara Boutique Collection. Hotelslọ nkwari akụ isii ahụ ga-arụ ọrụ n'okpuru ụdị ọkwa dị elu na nke elu elu Centara na Centara Boutique Collection brands. Centara Paradise Inle Lake Resort & Spa ga-emeghe ọnụ ụzọ ya na Q4 nke afọ a.
Ndị ahịa ahụ gosipụtara ọnụnọ Centara ịbanye n'otu n'ime ahịa ndị njem na-eto ngwa ngwa n'ụwa ma na-enyere ụlọ ọrụ ahụ aka inweta isi ala Myanmar.
"Mkpakọrịta anyị na KMA Hotels na-anọchite anya nnukwu ihe dị mkpa maka Centara," ka o kwuru Thirayuth Chirathivat, Onye isi ụlọ ọrụ Centara. “Ọ na-enye anyị ohere iji gosipụta ọnụnọ dị mkpa maka Centara na mba nwere nnukwu ikike maka mmepe njem, ma anyị na-atụ anya inye aka na mmepe Mianmaa ma na-enye ndị njem ohere ọzọ ịnụ ụtọ ọbịbịa anyị nke Thai, nke mba ụwa. gafee ọtụtụ ebe. ”
KMA Group of Companies bụ ụlọ ọrụ na-ahụ maka nzuzo nke onye isi ala U Khin Maung Aye, onye isi oche nke CB Bank duziri ma duzie ya. Otu a gunyere ulo oru ndi ulo oru iri na ise na aru oru di iche iche.
"Obi dị anyị ụtọ na Centara ga-eweta mmamịrị njikwa ha na akara ngosi siri ike na obodo isii kachasị ewu ewu na Mianmaa," U Kaung Htet Tun, Onye isi njikwa nke KMA Group. “Mianmaa na-egosi ohere dị ukwuu maka uto nke ihe nkiri, na ọnụnọ Centara ebe a na-egosi ọkwa maka ọrụ ụlọ ọrụ nkwari akụ na ndị njem.”
Myanmar bụ mba nke abụọ kachasị ukwuu na Ndịda Ọwụwa Anyanwụ Eshia ma nwee otu n'ime akụ na ụba na-eto ngwa ngwa na mpaghara ahụ. A na-etinye ngalaba nke njem njem nke ọma maka oge uto; onu ogugu onu ogugu nke njem nleba anya nke obodo nke 8.5% kwa afo site na 2025 tinye Myanmar n’elu onu ahia ahia ndi mmadu kacha eto eto.
Myanmarlọ oriri na nkwari akụ isii nke Myanmar bụ ihe akaebe ọzọ nke atụmatụ mgbasawanye nke Centara, nke na-achọ ka ọnụọgụ ọnụọgụ abụọ nke ihe onwunwe n'okpuru njikwa ya site na 2022, yana ndị ọkachamara na Centara na ndị mmepe KMA Group ga-ebuli ọnọdụ ile ọbịa nke Myanmar.
Ndị isi njem na-enwe nchekwube maka mgbake njem na...
Ọgbaghara Black Friday na London ka ndị ọkwọ ụgbọ ala Tube dara November 26, 2021
Ọpụpụ ahụ kwụsịrị ọrụ n'ofe London na Black Friday, otu n'ime ụbọchị ịzụ ahịa kacha n'afọ, na-ere ahịa n'ọtụtụ ụlọ ahịa.
Ọstrelia zipụrụ ndị agha na Solomon Islands mgbe ọgba aghara aghara November 26, 2021
Ejikọtara ngagharị iwe a na ọtụtụ nsogbu mpaghara - ikekwe nke bụ isi n'ime ha bụ mkpebi gọọmentị Solomon mere na 2019 iji belata mmekọrịta mba na Taiwan maka China.
Mba ndị ọzọ kwụsịrị ụgbọ elu mba ụwa maka ụdị COVID-19 ọhụrụ November 26, 2021
Healthtù Ahụ Ike (wa (WHO) na-ekwu na ọnụ ọgụgụ buru ibu nke mmụgharị dị na ụdị ọhụrụ ahụ achọpụtara na-ewelite nchegbu siri ike maka etu ọ ga-esi metụta nchọpụta nchọpụta, ọgwụgwọ na ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa.
Cathay Pacific kagburu ụgbọ elu mgbe ndị ọrụ ụgbọ mmiri kwụsịrị iwu mgbochi iche November 26, 2021
A manyere Cathay Pacific ịkagbu ụfọdụ ụgbọ elu ndị njem ya na Hong Kong mgbe ọtụtụ ndị ọrụ ya jụrụ ịgbaso iwu mgbochi ndị ebu.
Israel machibidoro ndị ọbịa si mba asaa dị na ndịda Africa November 26, 2021
Mgbasawanye nke ndepụta 'acha uhie uhie' dị mkpa n'ihi nchọpụta nke ndị ọkà mmụta sayensị South Africa nke ụdị COVID-19 ọhụrụ na mpaghara ndịda Africa, ka ụlọ ọrụ PM si kwuo.
Nje Virus COVID Monster ọhụrụ: na-ewepụ ọgwụ mgbochi, na-agbasa ngwa ngwa November 25, 2021
Ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa ma ọ bụ na ọ bụghị- nke a nwere ike ọ gaghị eme nnukwu mgbanwe maka nje COVID ọhụrụ, ụfọdụ na-akpọ anụ ọhịa ugbu a. Ụdị dị iche iche na-agbasa ugbu a na South Africa.